तामाकोशी गाँउपालिकामा नदीजन्य बस्तु उत्खननको २१ लाख राजश्व नै गायब ! « News24 : Premium News Channel
तामाकोशी गाँउपालिकामा नदीजन्य बस्तु उत्खननको २१ लाख राजश्व नै गायब !
दोलखा । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा नदीजन्य वस्तुको निकासी गरे बापत लिइने कर संकलनमा २१ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको छ । गाँउपालिकाले २०७५ साउन १ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म गोपी खोलादेखि ढोलीखोलासम्मको तामाकोशी नदी क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा नदीजन्य वस्तुहरुको निकासी कर आफै संकलन गर्दै आएको थियो ।
गाँउपालिकाकै रेकर्ड अनुसार उक्त अवधिमा सो स्थानका ३ ओटा क्रसर उद्योगमा गाँउपालिकाले १८५६९ घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकासी गरेको छ । गाँउपालिकाले प्रति घनमिटर १६० रुपैयाँ ६० पैसा दरले संकलन गर्दा कुल २९ लाख ८२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ राजश्व उठ्नु पर्ने थियो ।
तर, अहिले गाँउपालिकाको खातामा नदीजन्य वस्तु निकासीबाट उठेको रकम ८ लाख ११ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ मात्रै देखाइएको छ । यस बाहेक २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजश्वको हिसाब किताब नै छैन । यो गाँउपालिकाकी उपप्रमुख उर्मिला खड्का केसी नै स्विकार गर्छन् ।
गाँउपालिकाको खातामा जानु पर्ने यत्रो पैसा कहाँ गएहोला त ? यसको जवाफ तामाकोशी गाँउपालिकाले निकाशी कर संकलन गर्दा दिएको एउटा प्रतिनिधि बिल बिजकबाटै स्पष्ट हुने रहेछ । गाँउपालिकाले दिएको यो ४४२५ नम्बरको रसिदमा गाडी न ६१७२ बाट गिट्टी निकाशी वापत १२६५ रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ । तर, यही रसिद नम्बरको को अर्धकट्टी अर्थात कार्यालयमा रहनेछ ।
यसमा ४४२५ नम्बरको रसिदमा गाडी नम्बर ५२९३ बाट गिट्टी निकासी बापत ४ सय ४२ रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ । अब यो रसिदमा मात्रै संकलकले गाडीबाट लिँदा १२६५ रुपैयाँ लिए भने गाउँपालिकालाई ४ सय ४२ रुपैयाँ मात्रै दिए बाँकी ८ सय २३ रुपैयाँ आफ्नो खल्तीमा हाले । गाडी नम्बर नै फरक–फरक उल्लेख गरिएपछि त झन् गाँउपालिकाको छाप भएको उक्त रसिदको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
यो बिषयमा गाँउपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विज्ञान कोइराला भने जानकार रहेनछन् ।